विविध Archives - The Nepali Video
सधै खाइ नखाइ हिड्ने इन्द्रेणी तनहु ढोरबाराहीमा रमाइलो गर्दै
निकै रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा इन्द्रणीको टोली तनहुमा पुगेको छ । रातिको समयमा सेकुवा खाँदै रमाइलो दोहोरीमा कलाकारहरू रमाउदै छन। इन्द्रेणी कार्यक्रमले कला सस्कृतीको जगेर्ना गर्दै दुखी गरिवको सेवा गर्ने गरेको छ । मनोरञ्जन संगै रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा कहिले स्टुडियो त कहिले देश विदेशका बिभिन्न ठाउबाट कार्यक्रमContinue Reading
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक साताको फरक राखेर कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । बोर्डले २०७८ सालको जेठ तेस्रो साता एसईई र अन्तिम साता कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा लिने गरी तयारी थालेकोContinue Reading
अपिल त्रिपाठीले गरे प्रहरीको पर्दाफास : सधै घुसको लेनदेन ? प्रहरी र ठेकदार लफडा, प्रबक्ता भन्छन : त्यस्तालाई छाड्दैनौ
चर्चित पत्रकार अपिल त्रिपाठीले प्रहरी र ठेकेदार बिचको लफडाको पर्दाफास गरेकाछन । उनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केमा यस्ता थुप्रै विषयमा चिरफार हुने गरेको छ । यसै क्रममा उनले प्रहरी र ठेकेदार विचको लेनदेनको विषयमा पनि कार्यक्रम तयार पारेका छन । घुस दिनु र लिनु दुबै गैर कानूनी भएता पनि नेपालमाContinue Reading
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२१ को अक्सनमा नेपालबाट लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने मात्र छनोट भएका छन् । सन्दीपसहित ८ खेलाडीले नेपालबाट अक्सनका लागि नाम दर्ता गराए पनि १४औं संस्करणको आइपीएलका लागि हुने अक्सन लिस्टमा सन्दीपको नाम मात्र परेको बिसिसिआईले जनाएको छ । नेपालबाट सन्दीपसहित दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी,Continue Reading
भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका पल शाहले हार खाएर गाउँ फर्कन लागेको दिन सम्झिए Paul Shah
Host:- Biswaraj Samekham (Biswa Limbu) Guest:- Paul Shah (Purna Bikram Shah) Camera&Edit:- Chiran Rai, Ramesh Rai Using of this video on other channels and social sites without prior permission will be strictly prohibited. (Embedding on website is allowed. Post Production:- Mero Online TV Pvt. Ltd.Continue Reading
SUKUL GUFF | SEASON 1 EPISODE 13 | FEAT. NAMRATA SHRESTHA
Host: Avas Karmacharya Video Production: Exhibit Studio Pvt. Ltd. Track Title: Lonely Boy Artist Name(s): Alsever LakeContinue Reading
श्वेता खड्का मङ्सिर २२ गते बिहे गर्दै ।। Shweta Khadka Getting Married ।।Sweta Khadka marriage again
श्वेता खड्का मङ्सिर २२ गते बिहे गर्दै ।। Shweta Khadka Getting Married ।।Sweta Khadka marriage againContinue Reading
Najir Husen र Benisha Hamal बिच बिहे सम्भव छ ? ‘सिङ्गल छौं’ भन्दै जिस्किए | Ramailo छ
जातीय विभेदको कथालाई उठान गर्न लागिएको चलचित्र ‘भाँडाकुटी’का लागि लोकेशन खोज्दै यसको कलाकार र निर्माण टिम बुटवल पुगेको छ । बुटवलका विभिन्न स्थानमा चलचित्रका लागि लोकेशन हेरिएको र स्थानीयबासी र विभिन्न संघसंस्थाबाट साथ र सहयोग पाएको निर्देशक किरण बीकेले जानकारी दिएका छन् । चलचित्रका कलाकारद्धय बेनिशा हमाल र मुकुन भुषालContinue Reading
सोझी रचनालाई पुस्कल शर्माको यस्तो सुझाब
नेपाल आइडल सिजन ३ बाट चर्चामा आएकी गायिका हुन् रचना रिमाल । उनी नेपाल आइडलको उत्कृष्ट ८ बाट नै बाहिरिइन् । उत्कृष्ट ८ बाट नै नेपाल आइडलको यात्रा सकिए पनि यति बेला उनी निकै व्यस्त छिन् । उनले एक पछि अर्को गीत गाइरहेकी छिन् जसले उनलाई दर्शकको माया दिलाइरहेको छContinue Reading